Ukuthengisa nokuqeqeshwa kwamahhashi iSisily - Italy
Ukuvulwa Okugcwele Kweviki
Abaqeqeshiwe, Abanamakhono, Amadokhumenti Nama-Huru Ozala Ezingcolile
4.4 /5 amavoti (amavoti angama-14)
I-Cancascì izinzile kungobuchwepheshe obuphezulu kulo lonke Italia e-ukuzalanisa, Thengisa e Ukuqeqeshwa kwamahhashi yazo zonke izinhlanga. Ngo-Inzana 49 a I-Caccamo (I-Palermo), IScuderia Sicilia Cavalli ngabaqeqeshi bamahhashi kanye nabafuyi abaqeqeshiwe nabanekhono, ngenxa yentshisekelo nokuzinikela komhlaba we-equestrian, baphatha izinhlobo ezinhle kakhulu ngokukhethekile Amahhashi ase-Andaluse.
IScuderia Cancascì Ukuthengisa nokuqeqeshwa kwamahhashi eSicily - Ihhashi lika-Andalusian
I-Cancascì izinzile ngokukhethekile ukuzalanisa, Thengisa e Ukuqeqeshwa kwamahhashi e-Andalusian. Uhlobo oluhle, oluziqhenyayo, oluhle, i-Andalusian ihhashi elivela esifundeni sase-Iberia, livela esifundeni esingaziwa ngokuthi yi-Andalusia, labonga umhlaba wonke ngamakhono alo. Ngomthamo omuhle futhi okhanyayo, okulula ukuwaphatha futhi oyingqayizivele lapho wenza isinyathelo saseSpain, i-Andalusian nayo iyabizelwa ngezici zayo zobuhle, i-mane ende futhi eyindilinga, imvamisa iqoqwa ngesalfa elithambile, kanye nomsila othambile oshaya emhlabathini. Ibuye isetshenziswe njengomsunguli kanye nomthuthukisi wezinye izinhlobo, isikole sethu sokugibela Amahhashi eSicily isebenza nalokhu kuzalaniswa okuhle, okuthekelisa hhayi kuphela Italia kepha emhlabeni wonke.
Ukufuthwa kwamahhashi iSicily Scuderia Cancascì - Ukudlanga nokuzinikezela ezizukulwaneni ngezizukulwane
Ukuthengisa nokuqeqeshwa kwamahhashi eSicily, I-Cancascì izinzile uzinikele ngokuhlangenwe nakho nentshisekelo yezizukulwane eziningana emhlabeni we-equestrian. Umsebenzi owenziwa namuhla ngokuzinikezela okukhulu U-Antonino ukhanseliwe, kepha lokho kwazalwa ngugogo nentando yakhe ukuletha Palermo, futhi ngokunembile a I-Caccamo, ehamba phambili ekuzaleni nasekuqeqesheni okwaziwayo emhlabeni wokugibela amahhashi. Amahhashi eSicily ubelokhu ekubhekaneni nokukhethwa kanye nokwenziwa kabusha kwamahhashi azalanayo, athunyelwa kwamanye amazwe, futhi sibonga ukwethulwa kwezinhlobonhlobo ezintsha ezifana I-Quartet Horse, i-Arab kanye ne-Andalusian, ihhashi le-Flagship. Ngenxa yokusebenza njalo nokucophelela nokukhethwa kwama-stallion wegazi elihlanzekile, i-Cancascì Stable inqhosha yezinhlobonhlobo ezahlukahlukene zekhwalithi ngokuya ngamazinga aphezulu omhlaba.
Amahhashi uSisily Cancascì - Ukusuka kuTrekking to Sportsestest
Hhayi kuphela Ipulazi lamahhashi eSicily. Amahhashi, IScuderia Cancascì nayo inekhono nolwazi kwi Thengisa, Ukuziqeqesha nokugibela amahhashi. Ukuyala, uthando kanye nolwazi kuyisisekelo sezindlela ezahlukahlukene zokuqeqesha ze I-Antonino Cancascì futhi bonke abasebenzi bayo abahlanganyela nsuku zonke emfundweni nasekuqeqesheni izinhloso eziningi zamahhashi aphephile, anele futhi anekhono. Kusuka Ukuhamba ukuphathwa kwamahhashi okuphephile, ukuqeqeshwa kungaba namandla futhi kucacisiwe emidlalweni ehlukene yama-equestrian efana I-Team Penning, iBarrel Pole Banding, iGquba, iSalto kanye nesikole samabanga aphezulu. Ukuhlonipha nokunakekela isilwane, ngokuqeqeshwa komuntu ngezidingo kanye nobuntu behhashi, kuhlale kuholela ekwanelisweni okukhulu kwabaqeqeshi kanye namakhasimende, angakwazi ukuziqhenya ngokuqagela okuhle futhi okunekhono ezinhlelweni ezihlukile.
Ukuthengisa Nokuqeqesha Amahhashi eSicily - I-Cancascì Esitebeleni Uthando Nenhlonipho Ihhashi
I-Cancascì izinzile, ngo-Inzana 49 a I-Caccamo, esifundazweni Palermo, kunjalo Ukuzala - Ukuqeqeshwa - Ukuthengiswa kwamahhashi eSicily nase-Italy. Umhlaba wonke weHhashi ngama-degree angama-360: umlando we I-Cancascì izinzile wazalwa ikakhulu kusukela othandweni nasekuthandeni kwezwe lokugibela amahhashi, okuthe ngokuhamba kweminyaka nangokulandelana kwezizukulwane, kuholele ekwakhiweni kwezinhlobo zegazi ezihlanzekile kanye nokwanda kokuphiswa kwezinhlobo ezintsha zohlobo, kufaka phakathi Ihhashi lase-Andalusi, athunyelwa emazweni aphesheya futhi aqeqeshwa ngokuya ngemibhalo esezingeni eliphakeme yohlobo lwe-Canon High School. Ngaphezu kokuzalela, I-Cancascì izinzile eCaccamo isipiliyoni sihlanganiswe futhi Thengisa e Ukuqeqeshwa kwamahhashi okuhloswe ngalo imidlalo ehlukene yama-equestrian. Uma uchwepheshe futhi uwathanda amahhashi futhi ufuna ukuncika kochwepheshe abakhathalela inhlala-kahle yezinhlobo zabo bavakashela ICancascì ukuthengiswa okuzinzile nokuqeqeshwa kwamahhashi eSicily eCaccamo - Palermo.
Ikheli: Nge-Inzana, 49
I-POSTAL CODE: 90012
Umakhala ekhukhwini: 338 3258081
Inombolo ye-VAT: 06092920823